Xaabo - Wikipedia
Xaabo waa tuulo ku taala gobolka gardafuu waxayna ka tirsantahay daegmad caluula wana magaloyinka ugu qadiinsan gayiga somalia waxy caan kutahay magalada xaabo khayradka dabiiciga ah oo ay kamid yihin kaluunka,beenyada,maydiga,luubanta iyo beeraha timirta! oo aad oga baxa.sida lo ogsonyahy magalda xaabo waxy ledahay qoori aad uweyn oo Gacan lagu sameeyay waxaana caanshuuri jiray xiligaa Dacar magaca waxaa la oran jiray qooriga sheexo oo xiligaa bilowday ka dibna noqday qoori weyn oo ay doonyaha galaan maantadan.
Waa hadba xili ay kulushahay iyo xili ay qabowdahay. magalada xabo waxay kamid ehed magaloyinki uu katalin jiray Dacar Ahmed ganacdi ballaarana uu kulahaa xaabo ma ahayn halka maanatay ay kutaalo xaabada asalka ah waxay ku darsantay badda. Xaabo waxaa daga beesa Guul Harti(Geesaguule)
Dacar wuxuu ahaa nin cadaalad dadka wax ugu qeybiyo.
alla unaxariste waxa lagu asay Dacar magalada xaabo oo ah meshi uu kudhashay.
magalada xaabo waxay ehed magaloyinka xaga ganacsiga iyo waxbarashada ugu horeeyay xiliga dowlada iyo xiliga gumestaha.
xaabo oo kamida gobolka (Gardafue)aya qani ku ah kaluunka taaso sababtay in aay doonyaha iyo kalumysatada isugu yimadan marsada xabo.waxana lagu naanesa (Xaabo kamaa lama) laama wa magaalo yar o kutal africa taso aay ugu magac dareen subaaxiliyin ka shaqesan jiry degmada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaabo&oldid=200890"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 May 2020, marka ee eheed 20:22.